Bayanda abesifazane abahlela umndeni e-Afrika
KUTHIWA sandile isibalo sabesifazane abahlela umndeni emazweni ase-Afrika. Abanye basebenzisa amakhondomu abanye basebenzisa amaphilisi
UCWANINGO lwakamuva luveza ukuthi baningi abesifazane abahlela umndeni emazweni ase-Afrika.
Lolu cwaningo olwenziwe yinhlangano esebenzela umphakathi ebizwa ngeFamily Planning 2020 (FP2020) ithi abesifazane abawu-314 million emazweni awu-69 emhlabeni jikelele bayawuhlela umndeni.
Bawu-926 million abesifazane abasesigabeni sokuba nezingane emhlabeni jikelele kodwa abawu-314 million bayakusukumela ukuhlela umndeni.
Lolu cwaningo lweFP2020 ludedelwe ngoMsombuluko yile nhlangano eyakhelwe ukufundisa abesifazane nezingane amalungelo abo okuhlela umndeni ithi abesifazane bahlela umndeni ngokujova, ukudla amaphilisi okuhlela, abanye basebenzisa amajazi omkhwenyana nezinye izivikela kukhulelwa.
Umqondisi weFP2020, uNkk Beth Schlachter, utshele izintatheli engqungqutheleni yokuhlela umndeni ebiseNairobi, eKenya, kuleli sonto ukuthi abaningi abahlela umndeni base-Afrika,
Uthe iFP2020 yasungulwa yisikhulu sakwaMicrosoft uMnuz Bill nomkakhe uNkk Melinda Gates nohulumeni waseBritain ngo-2012 ukuze kuthi kufika unyaka ka-2020 abesifazane abahlela umndeni babe sebewu-120 million.
“Ukuhlela umndeni yilungelo lawo wonke umuntu. Kunabantu abasuke besengcupheni yokufa uma bekhulelwe ngakho kubalulekile ukuthi abesifazane bahlele umndeni ukuze babe nekusasa eliqhakazile. Lolu hlelo luyabagqugquzela ukuthi bafunde bangabi nezingane bengahlelile,” kusho uNkk Schlachter.
Uthe emazweni awu-69 abenze kuwo ucwaningo lokuhlelwa komndeni awu-41 ase-Afrika bese awu-21 abe se-Asia, Oceania, Latin America, Caribbean naseMiddle East.